Mapato Anopikisa Oshora VaMugabe neKufambira Dhongi Rakaora kuIndia
Kurume 10, 2016
Zimbabwean President Robert Mugabe addresses his staff during a surprise birthday celebration event at State House in Harare, Feb. 22, 2016.
Mapato anopikisa nenyanzvi munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika vari kushora zvikuru mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe nekuenda kuIndia asi vachizotadza kupinda mumusangano wavainge vashanyira vachiti wainge usina kurongwa zvakanaka.
Mutauriri waVamugabe, VaGeorge Charamba vanoti VaMugabe vakazoona kuti zvinhu zvikuru panyaya yekuchengetedzwa kwavo zvainge zvisina kumira zvakanaka zvakapa kuti varegedze kusvika kumusangano uyu.
Vamwe vakuru muhurumende vanoti VaMugabe vari kusingapore parizvino sezvo vakatanga vaendako vasati vasimuka kuenda kuindia.
KuSingapore ndiko kunoendwa naVaMugabe kana vachienda kunoona vanachiremba vavo, hapana ari kuziva kuti varikuona ana chiremba ava here.
Bepanhau reHerald riri kuti VaMugabe vari kuIndia, asi gurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro VaJonathan Moyo vataura patwitter kuti havana kusvika kuindia, asi vari kuramba kuti varipi.
Hatina kukwanisa kubata vacharamba kana gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika VaSimbarashe Mumbengegwi kuti tinzwe kuti VaMugabe varipi.
Gungano raiendwa naVaMugabe rinonzi World Culture Festival. Mapurisa emuNew Dehli, India muri kuitirwa musangano uyu anoti vakaronga musangano uyu veThe Art of Living Foundation havana kunge vagadzirisa nyaya yekuchengetedzwa kwevanhu uye pari kutyirwa kuti vanhu vanogona kutsikirirana vofa.
Mutauriri weMDC-T VaObert Gutu avo vanoti VaMugabe havaifanira kuenda kumusangano wakadai nekuti vamwe vatungamiri vanongotumira makurukota avo.
Mutauriri weMDC inotungamirwa naVaWelshman Ncube VaKurauone Chihwai vanoti VaMugabe vanofanira kumira kuita nzendo dzekunze vobatsira vanhu vanonetseka uye kubhadhara vashandi vayo.
Hurukuro naVaKurauone Chihwai
Nyanzvi munyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika uye vaimboshanda kumuzinda weZimbabwe kuAddis Ababa, Ethiopia VaClifford Mashiri vanoti zvaitwa nehofisi yaVaMugabe zvinhu zvinonyadzisa zvikuru uye hofisi yavo nemunyori mukuru wedare remakurukota VaMisheck Sibanda ndivo vakanganisa kubata nya iyi.